Facebookမှာ လော့ကျနေတာကို ရအောင်ဖွင့်နည်း | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
ယခုပြန်လည်မျှဝေပေးမှာကတော့FacebookမှာLockကျနေတာများထဲက အများဆုံးLockကျတဲ့Phone numberထည့်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့မြန်မာပြည်က သူတွေအတွက်ပါ။နိုင်ငံခြားမှာရှိသူတွေကတော့ ဖုန်းနံပါတ်ထည့်တဲ့နေရာမှာအားလုံးအဆင်ပြေကြပါတယ်။ Facebookကများသောအားဖြင့်မြန်မာပြည်က ဖုန်းနံပါတ်တွေထည့်ကြည့် Codeပြန်မပို့တာများတယ်။အဲဒီအခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားဖို့အတွက်
အောက်ကနည်းလမ်းတွေအတိုင်းလုပ်ဆောင်ကြည့်ပါ။ (100%)ရစေရမယ်လို့အာမခံပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အချိန်ကုန်ခံစမ်းသပ်ပြီး မြန်မာပြည်ကLockကျလို့ အကူညီတောင်းထားတဲ့ အစ်ကိုတဦးကိုလည်း သူ့အကောင့်ကို ယခုနည်းလေးစမ်းသပ်ရင်းနဲ့ ကူညီပေးလိုက်တာပါ။
ဒီနည်းလမ်းကိုစတင်ရှာဖွေတွေ့ရှိသူကတော့ သဇင်ကိုကို ပါ။သူက MMUGမှာပြန်လည်မျှဝေထားလို့ ကျွန်တော်က စမ်းသပ်ကြည့်ပြီးလုံးဝအဆင်ပြေလို့ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်တာပါ။ သဇင်ကိုကို ကိုလည်း Creditဒီနေရာကနေဘဲပေးပါတယ်။ကဲ……..ပြောနေတာနည်းနည်းများသွားပြီင်္။ အောက်ကနည်းအတိုင်း
<<<Text Plus Download Link>>>
<<<Playstore Direct Link>>>
DownပြီးPhoneထဲမှာ Installလိုက်ပါ။ပြီးရင် ဖွင့်လိုက်ပါ။အောက်ကပုံအတိုင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
နိုင်ငံနှင့် မိမိအသုံးပြုမည့် G mailကိုထည့်ပါ။
<<<YuilopApk Download Link>>>
ပြီးရင် ဖွင့်လိုက်ပါ။ အောက်ကပုံလေးအတိုင်းပေါ်လာပါမယ်။
အောက်ကနေရာမှခုနက Textplusမှာရရှိထားတဲ့ Phone Numberကိုထည့်ပေးပါ။ နိုင်ငံနေရာမှာတော့ United Statesကိုဘဲရွေးပါ။
ဒီအဆင့်ထိရောက်ပြီဆိုရင် Comfirm Codeကိုထည့်ပေးရမှာပါ။ အဲဒီCodeကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာဖောက်ထားခဲ့ Text plusရဲ့smsထဲမှာပါတဲ့Codeတွေကိုထည့်ပေးရမှာပါ။
နောက်တဆင့်ကိုဆက်သွားရင် ဒီနေရာကိုရောက်ရှိသွားပါလိမ့်မယ်။ဒီနေရာမှာမိမိဖေ့ဘွတ်မှာသုံးတဲ့နံမည်နဲ့G mailကိုထည့်ပေးလိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင်တော့ အောက်ကပုံအတိုင်း Yuilopကနေသင့်ဖုန်းနံပါတ်တခုကိုရရှိမှာပါ။
Get This numberကိုနှိပ်ပါ။
ဖုန်းနံပါတ်တောင်းတဲ့နေရာရောက်ရင် နိုင်ငံနေရာမှာ United States(+1)ကိုရွေးချယ်ပြီးခုနက Yuilopမှာရထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်လိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင်တော့ အဲဒီSMSထဲကCodeကလေးယူပြီးFacebookရဲ့ Comfirm Codeနေရာမှာထည့်လိုက်ရင်အားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီင်္း မိမိရဲ့လော့ကျနေတဲ့ Facebookအကောင့်လည်းပြန်လည်ရရှိသွားမှာပါ။
← Microsoft Toolkit V 2.4.9 Stable ( Office 2013,2007,2010) Activator- 40Mb
ProMyanKey လို့ ခေါ်တဲ့ မြန်မာကီးဘုတ် ဗားရှင်းအသစ်ထွက်ရှိ →
18 thoughts on “Facebookမှာ လော့ကျနေတာကို ရအောင်ဖွင့်နည်း”
bro, i already did as your ways to activate my friend's Facebook account. Thanks you so much for your kindness.i have one question, after i received Facebook activation code message, Yuilop Team send me message, they said "You just got credits for your last incoming sms: +0.05".I don't understand this meaning! 😕 Can you explain me? Please send me private message (yeaungster@gmail.com) or you can reply on comment. I hope you will reply me quickly. Sincerely,Ye Lin Aung
နောက်ဆုံးအဆင့်မှာမက်ဆေ့တော့ဝင်တယ်ဒါပေမယ့်facebook confrimation codeတော့မဝင်ဘူးဒီလိုကြီးပေါ်နေတယ်(you just got credits for your last incoming sms:+0.05)လို့ဝင်တာဘာလို့လဲရှင်းပြပါဦး
htoo lay says:
အစ်﻿ကို Yuilop က﻿နေ text+ ဖုန်းနံပတ်﻿ ထည့်﻿လိုက်﻿တာ text+ကို comfirmation code လုံးဝ မဝင်﻿လို့ဗျာ ဖုန်း သုံး﻿လေးလုံးနဲ့ စမ်းတာ မရ﻿သေးလို့ပါဗျ ဘာဆက်﻿လုပ်﻿ရမလည်း ခင်﻿ဗျ ကူညီပါဦး
yarzar naung says:
နက်လိုင်းမကောင်းလို့့ပါလိုင်းလုံးဝကောင်းတဲ့အချိန်မှာ လုပ်ပါ ရပါတယ်ခင်ဗျာ
credit ဝင်လာတာပါ သူ့အောက်ကmessage မှာကြည့်ပါ ရှိပါတယ်
Rahu Rrohee says:
yuilop ဖုန်းအတွက်cofirm code မပို့ဘူး
saizawmyo naung says:
yuilop ဖုန်းနံပတ်ထည့်တာ message ပြန်မလာဘူး error ပဲပြောနေတယ်ဗျ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကူညီပါဦးခင်ဗျ..
​နောက်​တစ်​ခုကလည်းလူ​တွေအပ်​တာများသွားပီးDisabledဖြစ်​သွားတယ်​လို​ပြောတယ်​ပြန်​လုပ်​လို့ရနိုင်​​သေးလားသိချင်ပါတယ်​ please reply